देउसाकी क्यान्सर पीडित मुना राईको उपचारमा आर्थिक अभाव, सहयोगी हात जुट्दै - Nepal News Site
Solu FM २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार २०:३८
सोलुखुम्बु : सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका–७ देउसाकी क्यान्सर पीडित मुना राईको उपचारमा आर्थिक अभाव भएको छ । पाठेघर सहित बे्रन क्यान्सर भई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत २८ वर्षीया राईको उपचारमा आर्थिक अभाव भएको हो पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
चैत्र १६ गते अस्पताल भर्ना हुनुभएकी मुनाको उपचारमा आर्थिक अभाव भएपछि सहयोगको याचना गर्न बाध्य भएको उहाँका श्रीमान मणिराम राईले सोलु एफ.एम.संग बताउँनुभयो । उहाँको उपचारमा अहिलेसम्म रु. ५ लाख भन्दा बढि खर्च भइसकेको भएपनि अझै बढी उपचार खर्च आवश्यक पर्ने हुँदा थप समस्या सृजना भएको बताइएको छ ।
अस्पतालमा कति बस्नुपर्ने र कति खर्च लाग्छ भन्ने यकिन नभएकाले छिमेकीहरुले स्वस्फुर्तरुपमा सहयोग संकलन अभियान सञ्चालन थालेको उहाँका जेठाजु जसबहादुर राईले बताउँनुभयो । उक्त अभियान मार्फत हालसम्म ५० हजार भन्दा बढि सहयोग प्राप्त बताइएको छ । सहयोग गर्न इच्छुकलाई मुना राइको एन.एम.वि. बैँक भक्तपुरमा रहेको खाता नम्बर ०२६०१५५६२३६०००१३ मा सहयोग रकम जम्मा गरिदिन परिवारले आग्रह गरेका छन् । साथै बिरामीका जेठाजु जस बहादुर राईको मोबाइल नम्बर ९८४९१०५८३५ सम्पर्क गर्न सकिने बताइएको छ ।